प्रतिनाद सांगीतिक साँझ २०७५ एकल गायनका साथ गुञ्जिने | suryakhabar.com
Home मनोरञ्जन प्रतिनाद सांगीतिक साँझ २०७५ एकल गायनका साथ गुञ्जिने
on: २ मंसिर २०७५, आईतवार १२:२३ In: मनोरञ्जनTags: No Comments
काठमाडौँ । गीतकार डा. डिआर उपाध्याय को ‘प्रतिनाद सांगीतिक साँझ २०७५’मार्फत एकल गाएनका साथ गुन्जिने भएका छन् । आफ्नो सांगीतिक यात्राको दौरानमा तयार भएका गीतहरु समेटेर यो कार्यक्रमको संयोजन गरिएको उनि बताउछन ।
यहि मङ्सिर ९ गते आइतबार काठमाडौँको रास्ट्रिय नाचघरमा विभिन्न गायक गायिकाहरुले एकल र युगल प्रस्तुति दिएर कार्यक्रम भब्य बनाउनेछन् । कार्यक्रममा संगीतकार राजु सिंहको संयोजनमा नेपालका लोकप्रिय बाध्यबाधकहरुको बेजोड प्रस्तुति रहने छ । साथै कार्यक्रममा राष्ट्रकबि माधव प्रसाद घिमिरेलाइ रु ५१ हजार नगद सहित अभिनन्दन पनि गरिने भएको छ ।
ग्ल्यामर प्लस प्रोडक्सन एण्ड मिडिया हाउस तथा डिआर म्युजिक एण्ड ट्रेडिङको आयोजनामा हुन लागेको यो कार्यक्रमलाइ यसोदा फूडले प्रायोजन गर्ने भएको छ । आफ्नो गितीकारिता जिबनकै पहिलो एकल साँझ मार्फत गुञ्जिन लागेका डा।डि।आर कार्यक्रमप्रति उत्साहित छन् ।
मेलिना राईको गीतमा अलिशा राईलाई जिस्काउदै पुष्प ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
२ मंसिर २०७५, आईतवार १२:२३